Injani Le Kuhle Chocolate Stores EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Injani Le Kuhle Chocolate Stores EYurophu
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 11/04/2021)
Ezwekazini laseYurophu is kabanzi lalidume ushokoledi wako futhi okumnandi. Empeleni, chocoholics eziningi ukujabulela ithi ukuhamba ukuthi waba nethuba ukunambitha ezinye flavour ezimangalisayo phakathi nohambo lwabo. Uma wenza indlela yakho ngokusebenzisa i-Yurophu futhi adore ushokoledi, esinakho izindaba olukhulu kuwe! Londoloza Isitimela wabheka European ushokoledi yesehlakalo futhi waqoqa uhlu 10 engcono ushokoledi ezitolo eYurophu. Kufanele uzithola kwelinye lala mazwe, futhi uthola ukuqalekela ushokoledi ezinye amazing, zinike isikhathi uvakashele kwenye yalezi zindawo. Ngeke udumazeke.
1. Kuhle Chocolate Stores in Paris – Debauve futhi Gallais
IFrance phakathi ukalwe kakhulu kakhulu yamazwe ushokoledi yayo. Wena qiniseka ukubona eziningi ushokoledi ezitolo ngenkathi ngokwenza indlela yakho emigwaqweni inhlokodolobha. Empeleni, ungase ugajwe inani ushokoledi ezitolo uhlangabezana. Ukuze uqinisekise ukuthi ukuzwa okungcono Paris kufanele sipho, sabuza azungeza ekumele ukuvakashelwa ushokoledi esitolo e-Paris. Abaningi waphendula ngokuthi kufanele kube Debauve futhi Gallais. Lokhu esitolo kumnandi akuyona kuphela endala emzini, kodwa kuyisimo Classic. It lavulwa ngo 1800s futhi idale ushokoledi okumnandi umphakathi selokhu. Empeleni, yokuthi zazizinkulu kangaka lapho bevula ukuthi baba abahlinzeki ushokoledi iNkantolo French futhi Napoleon. Abaholi abaningi enkulu French wajabulela ushokoledi zabo, ngakho nawe ungaphumelela.
Uma kuziwa Italy, eziningi mayelana Viziovirtù njengoba kufanele ukuthi ukuvakashelwa indawo abathandi ushokoledi. Isitolo ethandwa itholakala maphakathi Venice futhi kuyinto chocoholics dream. Konke esitolo kuyinto ngezandla izithako ezekhethelo. Banikela ngenhlanganisela ephelele yokunambitheka okuhle kanye nomoya omnandi waseVenice. Empeleni, ifilosofi yabo emhlabeni ushokoledi kuyathakazelisa. Balandela izindlela zesintu kanye izikebhe konke ngesandla. Hlanganisa ukuthi kuphela izithako umhlabeleli, futhi unendawo okufanele uvakashele kuyo enhliziyweni yeVenice.
3. Kuhle Chocolate Stores in Amsterdam – Vanroselen
ENetherlands ngokuvamile akuyona indawo yokuqala efika engqondweni yakho lapho ucabanga ngokusebenza ushokoledi. Nokho, kuseyingxenye indawo enkulu ukunambitha ezinye ushokoledi ubhedu emhlabeni. Omunye izitolo ethandwa kakhulu kuyinto e-Amsterdam. Vanroselen is uyisidingo ukuvakashelwa indawo noma ubani ngifuna ukuzama lomhlaba ushokoledi. Konke esitolo kwabo ngezandla, combining chocolate with various fruits and herbs to create unique and mouth-watering treats.
Uma uya ngokusebenzisa Luxembourg, qinisekisa ukuthi stop yilo ushokoledi esitolo enhle kakhulu isibe igama emhlabeni wonke. Nokho, original iyona chocolate House ka Luxembourg itholakala okuphambene Grand Ducal Palace, futhi iyikhaya ezinye zezindawo ezingcono kakhulu ushokoledi azidalile emhlabeni. Kutholwe eduze abasebukhosini, ungaqiniseka zinikeza kuphela best. Thokozela ulwazi wasezulwini ezinye flavour ubhedu emhlabeni.
5. Kuhle Chocolate Stores EVienna – Xocolat Manufaktur
Uma kwenzeka uthatha ukungcebeleka ngokusebenzisa esifundeni ocebile Hietzing e Vienna, ukuyovakashela Xocolat Manufaktur. Kulesi esitolo kumnandi, ungathola ezinye ushokoledi kakhulu eYurophu. Okwethulwa ingilazi bezinhlamvu ukuze bonke abantu babubone, ungabona ezinye izinhlobo elicwengisiswe kakhulu ushokoledi kuleli zwe. Ungaya khona ukujabulela ushokoledi noma khona emhlanganweni wokufundisana ngase sokufunda okuncane ngomdanso ikhono lokwenza ushokoledi.
6. U-Erich Hamann
Uma ufuna isitolo ocebile emlandweni futhi ukunambitheka, ke ubhekisise U-Erich Hamann e West Berlin. Zimbili izinto wenze lesi sitolo ivelele. Okokuqala, kuba umlando okumangazayo esitolo uqobo. Le nkinga yaqala 1928, futhi itholakala esakhiweni esinjengesakwaBauhaus esasinda empini yezwe yesibili. Okwesibili, kuba udumo lwabo yesiko futhi ukunambitheka okukhulu. Basaba iresiphi yasekuqaleni kusukela ukuvulwa ezitolo nothando ukuze gxila amnyama ushokoledi. Nokho, baze ukunikela chocolate white nezinye flavour ahlukahlukene. ushokoledi yabo amagxolo iyona mlonyeni, ngakho-ke qiniseka ukuyizama uma uvakashela esitolo.
7. Kuhle Chocolate Stores in Bruges – The Line Chocolate
Belgium liphakathi kakhulu uma kuziwa nobuciko ushokoledi. Ukuhamba phakathi Belgium amadolobha, uzobona eziningi morsels okumnandi obala. Enye yezindawo engcono kakhulu yokuthola ushokoledi kumnandi kuyinto The Line Chocolate e Bruges. Isitolo uyisidingo ukuvakashelwa noma ubani ukuthi uyawuthanda ucezu ezinhle ushokoledi. Kunezinto eziningi flavour wendabuko futhi kumnandi futhi ushokoledi zokuhlola ongakhetha kuzo. Okwenza i-Chocolate Line ivelele inqubo yayo yokwenza ushokoledi. Zenza ushokoledi ngokuqondile kusukela emabhontjisi futhi ezikhethekile imishini ukugaya nokuhlanganisa ukuxuba ushokoledi. Ngokuzayo okuso Bruges, zinike isikhathi sokujabulela ukunambitheka okumangazayo nokuhlangenwe nakho okuhle e-The Chocolate Line.
Switzerland idume ushokoledi yayo. Empeleni, singakwazi attribute oncibilikile Okhahlamba. Uma ufika kuleli zwe, uzophawula ukuthi ushokoledi ikhona yonke indawo. Cishe yonke indawo uya ugcwele ushokoledi ezitolo ukunikela kokulunywa ukudla. Uma ufuna ukuzwa okungcono Switzerland kufanele sipho, abaningi bayavuma ukuthi Max Chocolatier iyona indawo ephelele vakashela. Kuyinto eyintandokazi, futhi ngesizathu esihle. Basebenzisa izithako top-izinga futhi zikhiqiza ushokoledi best Switzerland. Baphinde babe esiyingqayizivele, ezine zonyaka imenyu elenza yezinkathi ezithile ushokoledi flavour. Ekuphetheni, ungathola ezihlukahlukene okuthandwa, kuye ngokuthi uma uvakashela esitolo.
Zurich ukuze Lucerne Izitimela
Bern ukuze Lucerne Izitimela
Geneva ukuze Lucerne Izitimela
Konstanz ukuze Lucerne Izitimela
9. Kuhle Chocolate Stores Ngo Budapest – chocolate Rozsavolgyi
Hungary kuyinto Igugu elifihlekile ngoba chocoholics. Zenza ezihlukahlukene kophudingi emangalisayo, noshokholedi yabo ahamba. Okufanele ukuvakashelwe ukujabulela ushokoledi omangalisayo chocolate Rozsavolgyi e Budapest. It unikeza omningi awukudla sweet futhi, okubaluleke, ezimangalisayo ushokoledi okudaliwe. ushokoledi yabo izuzwe udumo amazwe nge ushokoledi yabo bonbons, futhi uma uzama kubo, kuyacaca ukuthi kungani. ocebile, aesthetically morsels elimnandi kukhona wasezulwini. Stop ngu uma ukuhamba kuya e-Budapest.
Kugcine e uhlu lwethu 10 Kuhle Chocolate Stores in Europe Sprungli. Uma ufuna indawo emelela umqondo classical ushokoledi Swiss, ubhekisise Sprungli e Zurich. Esitolo kwavulwa 1859 futhi wenze emangalisayo, olwakhiwe ushokoledi okudaliwe selokhu. Uma ufuna ukuzwa ushokoledi omkhulu ikhiqizwa lekhethelo izithako, ukuvakashelwa Sprungli.
Ekuphetheni, Europe uyindawo ejabulisa umuntu ufuna ushokoledi engcono engcono ushokoledi ezitolo noma nje fan Choco.
Ingabe ukulungisa ukuzwa chocoholics ipharadesi phakathi kohambo lwakho olandelayo ngokusebenzisa Europe? Incwadi Isitimela Ticket ukuya endaweni oya kuyo oyifunayo futhi lizwakale yonke banayo sipho.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “10 Kuhle Chocolate Stores EYurophu” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-chocolate-stores-europe%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#uswidi #izitolo ushokoledi europetravel Ukudla